ISuphu yeNoodle yeNoodle yeNkuku eCreamy (ukusuka ekuqaleni) - Iiresiphi
ISuphu yeNoodle yeNoodle yeNkuku eCream
Ayikho isuphu efudumala intliziyo njengesuphu yenkukhu ekhrimu yenoodle eyenziwe ekuqaleni!
Le resiphi ijika i ezininzi izithako ezilula kwi hug yokugqibela esityeni. Inkukhu ethambileyo kunye ne-noodles kwi-broth creamy kunye nemifuno entsha. Elona nyango lifanelekileyo lokubanda, iintsuku ezibhityileyo okanye xa abantwana befumana i-sniffles!
Kutheni uthengela isuphu enkonkxiweyo xa unokubethelela le nguqulelo ilula, yesitovu ngaphandle kwexesha kwaphela!
indlela yokubeka i-zipper kumkhondo
Usebenzisa izithako ezitsha (kusenokwenzeka ukuba uninzi lukhona).
Sebenzisa inkukhu ephekiweyo ukwenza le recipe ngokukhawuleza okukhulu (inkulu ngokushiyekileyo okanye inkukhu ye-rotisserie).
Inkukhu ekrwada isebenza kakuhle kule recipe, jonga amanqaku eresiphi ixesha elongeziweyo lokupheka.
Yenza ngokukhawuleza kwimbiza enye.
Best Chicken Soup Izithako
IMIFUNO Iresiphi yethu inazo zonke izithako zemveli ezifunyenwe kuyo isuphu yenoodle yenkukhu njengetswele, iminqathe, kunye neseleri.
INKUKHU Inkukhu yeRotisserie okanye inkukhu eshiyekileyo yenza le suphu ikhawuleze kakhulu kodwa inkukhu ekrwada ingasetyenziswa nayo (okanye uqale nge inkukhu yonke kwaye uyibilise ukuba uyathanda).
Ukuba usebenzisa amabele enkukhu ekrwada, jonga amanqaku exesha elongeziweyo lokupheka.
IPASTA Sebenzisa naluphi na uhlobo lwepasta oyithandayo. Pheka i-pasta ngecala kwaye uyifake kwisitya ngasinye. Oku kuyigcina ekufumaneni i-mushy kwaye kungcono ukuba uceba ukuba neentsalela.
Ndiyakuthanda ukusebenzisa i-linguine entsha (okanye ndiyenze ibe yi- isuphu yetortellini ) kuba bapheka ngokukhawuleza.
indlela yokwenza umpu we tattoo owenziwe ekhaya
Kutheni ungaphakamisi ngamasuntswana e-bacon, itswele eliluhlaza elisikiweyo, okanye eyethu eyethu igalikhi kunye ne-croutons yemifuno .
Khonza izitya ezishushu zesuphu yenkukhu ekhrim nge Iisandwich zesonka samasi eziqhotsiweyo , okanye ezinye itshizi ikonofile breadsticks .
ungaxela njani ukuba inja yam iyafa
Uyenza njani isuphu yeNoodle yeNoodle yeNkuku
Isuphu yasekhaya ekhilimu emnandi kulula kakhulu ukuyenza, ngakumbi ngenkukhu ephekwe kwangaphambili!
Gcoba imifuno kude kube yithenda (ngokweresiphi engezantsi).
Yongeza umhluzi kunye ne-seasonings kwaye ubilise de imifuno ithambile.
I-Whisk cream kunye ne-corn starch kwaye ungeze kwi-simmering kunye nenkukhu.
Faka i-pasta, ixesha kwaye usebenze ngokukhawuleza.
Iingcebiso kwiiSuphu ezineCream
Ukuba wongeza imifuno eyongezelelweyo , ukwandisa ubungakanani bomhluzi ukuze ibhodwe lingagqithisi.
Ukusebenzisa inkukhu ekrwada , ukwandisa umhluzi ngeekomityi ezi-2 kwaye ungeze amabele amabini enkukhu. Yibilise inyama yenkukhu engaphekwanga engaphekwanga imizuzu engama-20 kunye nemizuzu engama-30 ukuba ungaphakathi. Susa inyama yenkukhu, uyinqumle kwaye uyibuyisele embizeni.
Pheka ipasta ecaleni ukuba uceba ukugcina iintsalela.
Ukujiya iisuphu ezikhrim gxobhoza kwezinye iiflakes zeitapile okanye udibanise i-cornstarch kunye nomlinganiselo olinganayo wamanzi kwaye ugxobhoze kwisuphu ebilayo kancinane ngexesha.
Ukuba usebenzisa inkukhu ye-rotisserie kwaye unexesha elininzi, susa yonke inyama kwaye ubeke eceleni iresiphi. Emva koko galela amathambo (ngomhluzi wesodium ephantsi kunye netswele) ubuncinci iiyure ezi-2-3 okanye imini yonke kwisipheki esicothayo esisezantsi ukwenza umhluzi omnandi onencasa efana neyenziwe ekhaya.
indlela yokwenza intombazana ikufune
Ukugcina kunye nokufudumeza kwakhona
Phinda ushushubeze kwisitovu okanye kwinkonzo enye kwi microwave. Isobho senkukhu siya kugcina efrijini malunga neentsuku ezi-4 nje ngokuba igqunyiwe.
Ukuba iqhwa, pheka i-pasta ngokwahlukileyo kwaye ungafaki kwisobho. Yongeza ipasta entsha ephekiweyo xa inyibilikile.
Ukukhenkcisa isuphu yenkukhu ekhrimu, faka iinxalenye kwi-quart okanye i-gallon-sized zipper bags kwaye ubhale umhla ngaphandle kwaye uqhwale ukuya kwiinyanga ezi-3. Kusenokufuneka ukuba ijiyelwe nge-cornstarch xa sele inyibilikile.
Ezinye iiSuphu ezineCream
ISuphu yeTortellini eCreamy
Isuphu yeBrokholi yeCheddar
I-Cream eyenziwe ekhaya yeSobho yenkukhu
I-Potato Leek Soup
I-Potato Broccoli Soup
ISuphu yeAlfabhethi eLula
Ngaba uyayithanda le Sophu yeNoodle yeNoodle Yenkukhu? Qinisekisa ukushiya umlinganiselo kunye nenkcazo apha ngezantsi!
4.94ukusukaShumi elinantlanuiivoti ReviewIndlela yokupheka
Ixesha lokulungiselelaAmashumi amabini imizuzu Ixesha LokuphekaAmashumi amabini imizuzu Ixesha elipheleleyo30 imizuzu Iinkonzo6 iinkonzo Umbhali Holly Nilsson Le suphu yenkuku yenoodle inencasa, inencasa, kwaye izele yinkukhu & nemifuno emitsha!
▢Nye icephe ibhotolo
▢Nye itswele idayisi
▢Mbini enkulu iminqathe isikiwe
▢Mbini iimbambo isileri isikiwe
▢4 iikomityi umhluzi wenkukhu
▢Nye icephe isinongo senkukhu
▢Nye amagqabi ebheyi
▢4 iiounces ipasta eyomileyo njenge-spaghetti okanye i-linguine
▢Nye indebe ikrimu enzima
▢1 ½ amacephe cornstarch
▢Mbini iikomityi inkukhu ephekiweyo inqunqwe
▢iparsley yokuhlobisa ngokuzikhethela
Nyibilikisa ibhotolo epanini phezu kobushushu obuphakathi. Yongeza itswele, iminqathe, kunye necelery kwaye upheke imizuzu 3-4 okanye de itswele ithambe.
Yongeza umhluzi, i-seasoning, kunye neqabunga le-bay kunye nokugubungela. Yima imizuzu eyi-10.
Ngelixa isuphu ibilayo, pheka ipasta al dente ngokwemiyalelo yephakheji. Khupha kakuhle.
I-Whisk cream kunye ne-corn starch kwisitya esincinci. Yongeza kwisuphu kunye nenkukhu kwaye uvumele ukuba udibanise imizuzu emi-5 ngaphezulu.
Susa iqabunga le-bay, ugxobhoze kwi-pasta, ixesha ngetyuwa kunye nepepile ukunambitha.
Ukuba ukongeza imifuno eyongezelelweyo, kwandisa umthamo womhluzi ukuze ibhodwe lingagxili kakhulu.
Ukusebenzisa inkukhu ekrwada , ukwandisa umhluzi ngeekomityi ezi-2 kwaye ungeze amabele amabini enkukhu. Yibilise inkukhu engaphekwanga engaphekwanga imizuzu engama-20 kunye nemizuzu engama-30 ukuba ungaphakathi. Susa inyama yenkukhu, uyinqumle kwaye uyibuyisele embizeni.
Pheka ipasta ngecala ukuba uceba ukugcina iintsalela.
Ukujiya le suphu uqhubele phambili uvuselela ezinye iiflakes zetapile okanye udibanise i-cornstarch kunye nomlinganiselo olinganayo wamanzi kwaye uvuselele kwisuphu ebilayo kancinci ngexesha.
Ukuba usebenzisa inkukhu ye-rotisserie kunye nexesha alikho umcimbi, susa yonke inyama kwaye ubeke eceleni iresiphi. Emva koko galela amathambo ubuncinci iiyure ezi-2-3, okanye imini yonke kwi-Crockpot okanye umpheki ocothayo ophantsi ukwenza isitokhwe esimnandi sasekhaya.
Iikhalori:336,Iicarbohydrates:22g,Iprotheyini:19g,Amafutha:19g,Amafutha aGqithisiweyo:Shumi elinanyeg,Amafutha eTrans:Nyeg,ICholesterol:99mg,Isodium:669mg,Potassium:458mg,Ifayibha:Mbinig,Iswekile:3g,IVithamin A:4733IU,Ivithamin C:14mg,Ikhalsiyam:68mg,Iayini:Nyemg
IkhosiI-Appetizer, inkukhu, isidlo sasemini, iSide Dish, isuphu
Ukutya Kukhuseleko Umtshato Wokuziphatha Iqela Uqeshiso Amakhandlela Imiboniso Yesilayidi Umyili Ingxoxo Irings
ukutya okungakanani kwitheko lama-50
ungazi njani ukuba intombazana inomdla kuwe
zihlala ixesha elingakanani kumphezulu womhlaba
izihlangu ezisebenza kakuhle zentsimbi
indlela yokuhlobisa i-gazebo ngomtshato